3-भाग रोकथाम कार्यक्रम | इनाम पुरस्कार
छोड्दै पोर्न पुरस्कार फाउंडेशनको तीन भाग रोक्ने कार्यक्रम
इवार्ड फाउण्डेसनको तीन-पक्ष रोकथाम कार्यक्रम
इन्टरनेट पोर्नोग्राफी लतको रोकथाम पुन: प्राप्तिलाई समर्थनको रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
अरूलाई व्यथ्यबाट बच्न मदत गर्न मद्दतमा एक भूमिका छ। इन्टरनेट पोर्न लत वर्तमान मा एक विशेष जोखिम हो। अधिकतर मानिसहरू पनि यो चिन्ता गर्न सक्दैन कि यो नशे कोइराला हुन सक्छ।
रिकभरी रिकवरी भन्दा धेरै सजिलो छ। अधिकांश नशेले अन्ततः उनीहरूको नशेको व्यवहार रोक्न सक्छन्। यद्यपि, उनीहरूले अझै पनि महसुस गर्न सक्छन् कि उनीहरुका बाँकी जीवनका लागि नशे को हुन्। यो केहि हद सम्म लायक छ।
इनाम पुरस्कार रोकथाम कार्यक्रम हामी सिफारिस गर्दछौं ...
मानिसहरूलाई इनाम प्रणाली कसरी काम गर्छ र अश्लील अश्लीलबाट बच्न किन राम्रो विचार हो भनेर बारे सिकाउनुहोस्। हाम्रो खण्डहरू हेर्नुहोस् मस्तिष्क आधारभूत.
आवश्यक पर्ने मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान गर्नुहोस्। 'नामित व्यक्ति' (स्कटल्याण्डमा) वा व्यावसायिक परामर्शको माध्यमबाट मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। अर्को विचार रिकभरी वेबसाइटहरूमा अन्य व्यक्तिको चुनौतीहरूको बारेमा पढिरहेको छ। यसले तपाइँलाई पहिलेको शताब्दी वा सम्बन्ध चिन्ताहरूसँग सम्झौता गर्न प्रेरणा दिन सक्छ
जीवनको जीवन सिक्नको लागि जीवनको कला सिकाउनुहोस् जीवन पूरा गर्नुहोस्। सबैलाई भावनात्मक अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत विकासको समर्थन गर्ने आउटलेट चाहिन्छ। यसमा स्वस्थ यौन र सम्बन्ध शिक्षाहरू सन्तुलित इनाम प्रणाली गतिविधिमा आधारित हुन्छन्। यसले सन्तुलन, सार्थक, सम्मानजनक, मायालु सम्बन्धको लागि लक्ष्य राख्छ।
हामी किन यो सिफारिस गर्छौं?
उपचार भन्दा बरु रोकथाम - यो औषधि रहित र सस्तो छ
समग्र लत घटाउँछ
खुशी र लामो जीवनको लागि प्रेम प्रेम हो
राम्रो सेक्स र सम्बन्ध शिक्षा
हाम्रो दृष्टि सबैको लागि राम्रो गुण, सबूत आधारित, इमानदार र समावेशी सम्बन्ध शिक्षाको पहुँच छ।
यो विभिन्न कारणहरूको लागि एक संवेदनशील विषय हो, तर गरीब वा कुनै लिंग र सम्बन्ध शिक्षाको नतिजाहरू गम्भीर छन्। हामी प्रभाव पार्ने इन्टरनेट पोर्न हाम्रो समाजको भलाइमा रहेको उपेक्षालाई बेवास्ता गर्न सक्दैनौं। यो आगामी अगमवक्ताहरूमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ। यो एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा हो।
इनाम पुरस्कार फाउण्डेसन सबै स्कूलमा राम्रो शिक्षण सामग्रीको उपलब्धतालाई सहयोग गर्न र अरू जहाँ चाहिन्छ भने सहयोगको विकास गर्न इच्छुक छ।
<< TRF 3-चरण रिकभरी मोडेल